တရုတ်နီဟု အမည်ရသည့် တရုတ်ပြည်ဖြစ် အင်ဂျင်စက်များသည် တဒုန်းဒုန်း၊ တဒိုင်းဒိုင်း မြည်သံများကို ကြွေးကြော်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ကာလ အတန်ငယ် ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သည်။
တရုတ်နီတို့သည် ပ၀တိ်္တသားများသာ ဖြစ်သော်ငြားလည်း နေရာတကာတွင် လူတွင်ကျယ် လုပ်တတ်သည်။ ရေတင်ရာတွင် သော်လည်းကောင်း၊ မီးစက်မောင်းရာတွင် သော်လည်းကောင်း၊ ထော်လာဂျီမောင်းနှင်ရာတွင် သော်လည်းကောင်း၊ စက်တပ်လှေမောင်းနှင်ရာတွင် သော်လည်းကောင်း၊ စပါးကြိတ်ခွဲရာတွင် သော်လည်းကောင်း အသံတစွာစွာပြုပြီး လူလုံးပြတတ်ကြ၏။ ဤသို့နှင်နှင်လျှင် တရုတ်နီတို့သည် “တရုတ်နီစွမ်းအား ခေတ်ကျော်လွှား”ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်ကို ကိုင်စွဲပြီး မြန်မာပြည် အနှံ့ နယ်ချဲ့နေလေတော့၏။
Read more: အမည်ပေးမထား (၃)
Read more: အမည်ပေးမထား (၂)
Written by သိပ္ပံ မောင်ဝ
အသံလွှင့်စက်၊ အသံဖမ်းစက်များသည် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့၏ အခြေအနေကို များစွာပြောင်းလဲလိုက်လေသည်။ အသံလွှင့်စက်၊ အသံဖမ်းစက်များ မပေါ်မီ အတီတေ အခါက တေးသံဆိုင်းသံများကို ကြားလိုလျှင် ပွဲလမ်းသဘင်သို့ လည်းကောင်း သွားပါမှ၊ ဓါတ်ပြားများကိုသော်လည်းကောင်း ဝယ်ထားပါမှ သဘင်သည်များကိုသော်လည်းကောင်း ဖိတ်ခေါ်ပြီး သီဆိုခိုင်းပါမှ ကြားရလေသည်။
ယခုခေတ်တွင်ကား ဤသို့ မဟုတ်တော့ပြီ။ အသံဖမ်းစက်မှ ခလုတ်ကလေး လှည့်လိုက်ရုံ၊ နှိပ်လိုက်ရုံနှင့် သီချင်းအမျိုးမျိုးတို့ကို ကြားရလေသည်။ တစ်မျိုးကို မကြိုက်သေးလျှင် တစ်မျိုးကို ပြောင်း၍နားထောင်နိုင်၏။
ရှေးအခါက သတင်းထူးကို ကြားလိုလျှင် သတင်းစာများကို မျှော်ရလေသည်။ ယခုမူကား အသံဖမ်းစက်ကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်မှ သတင်းများကို ပူပူနွေးနွေးကြားသိရလေသည်။ သတင်းစာများတွင်ကား (၃-၄) ရက်ကြာမှ ထိုသတင်းများကို ဖတ်ရလေသည်။
ရှေးအခါက ဗဟုသုတကို သိလိုလျှင် စာအုပ်များကို သတိရ၏။ ဗဟုသုတ ဟောပြောပွဲများသို့ သွားရောက်နားထောင်ရ၏။ ယခုမူကား ထိုဗဟုသုတ အမျိုးမျိုးတို့ကို အသံဖမ်းစက်၏ ကူညီချက်အရ မပင်မပန်းဘဲ ရနိုင်လေသည်။
ရှေးအခါက စစ်တိုက်ရာတွင် ဗုံးအမြောက်၊ စက်သေနတ်တို့ကို အကြီးအကျယ် အသုံးပြုကြရသည်ကို လူအများ၏ မျက်မြင်ပင်ဖြစ်တော့၏။ အသံဖမ်းစက်၊ အသံလွှင့်စက်များသည် ယခုခေတ် စစ်ပွဲများတွင် အရေးအကြီးဆုံး၊ အရာအရောက်ဆုံးသော လက်နက်ကြီးများဟု ဆိုလျှင် မှားလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
ဤမျှ အရေးကြီး အကျိုးများသော အသံလွှင့်စက်၊ အသံဖမ်းစက်များ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်မှာ မကြာသေးပေ။ နိုင်ငံခြားတွင် ထွန်းလွန်းမက ထွန်းကားနေသော အခါကျမှ မြန်မာပြည် ကာလနဂါးကြီး လူးလွန့်ရုံမျှ ဖြစ်၏။
Read more: အသံလွှင့်စက်
Read more: ရုပ်ပုံလွှာ
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က ကျွန်တော် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ထဲ ၀င်လိုက်တယ်။ အိမ်က အိမ်သားတွေဝိုင်း တိုက်တွန်းအားကြီးလို့ပဲ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဆို ၀င်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ မ၀င်ဖြစ်တာက တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲက မီးသတ်တပ်ဖွဲ.၀င် ရဲဘော်တွေရဲ. နေပုံထိုင်ပုံကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့တော့ မဖြစ်ဘူးထင်လို့  ။သူတို.ရဲ. နေပုံထိုင်ပုံ ပြောပုံ ဆိုပုံတွေက သူတို.အချင်းချင်းတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်က သူတို.ရဲ.ပုံစံတွေကို မကောင်းဘူးလို. အပြစ်တင်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်နဲ. အဆင်မပြေနိင်တာကိုပဲ ပြောတာပါ။ သူတို.ကြည့်ရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ တော်တော် လေးယုံကြည်မှု. ရှိကြပုံပါပဲ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်ကယ်အငှားယာဉ် မောင်းသမား ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွံ.အနားမကြားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖြစ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ.ထဲဝင်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေးပါဝင် လုပ်ဆောင်နေလို. ရှိရင် လူတစ်ယောက် ဟာ မျက်နှာမငယ်တော့ဘူး။ ရပ်ရေးရွာရေးကို နဖူးက ချွေးခြေမကျအောင်လုပ်နေသူ မှန်ရင် ရပ်ကွက်ထဲ အရေးတယူခေါ်ကြပြောကြနဲ. ဖြစ်လာနိင်တယ်။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို.ရပ်ကွက် မှာ ဆိုင်ကယ်အငှားယာဉ်မောင်း သမားဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွံအနားမကြားဖြစ်ဖြစ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ.ထဲ ၀င်ပြီး ရပ်ရေးရွာရေး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေလို.ရှိရင် လူတစ်ယောက်ဟာ မျက်နှာ မငယ် တော့ ဘူး။ ရပ်ရေးရွာရေးကို နဖူးကချွေး ခြေမကျအောင် လုပ်နေသူမှန်ရင် ရပ်ကွက်ထဲ အရေးတယူ ခေါ်ကြပြောကြနဲ. ဖြစ်လာနိင်တယ်။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို.ရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော်တို. ရပ်ကွက်ထဲမှာ အရွယ်ရောက်သူမှန်ရင် မီးသတ် တပ်ဖွဲ.ထဲ ၀င်ကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တောင် အခုမှဝင်ဖြစ်တာ နောက်ကျတယ်လို. ဆိုနိင်တယ်။
Read more: သေခြင်း
သီးသန့် (၉) ဆောင်၊ အခန်း (၂)
ဆောင်းရာသီ အမှတ် ၂၉